iOS 11 inobvisa mukana we multitasking neiyo 3D Kubata | IPhone nhau
iOS 11 inobvisa mukana we multitasking neiyo 3D Kubata
Apple payakaunza 3D Kubata tekinoroji, ivo vakomana veCupertino vakatiratidza zvese sarudzo yatakapiwa neiyi tekinoroji. Kusiya kushandiswa kunoitwa neumwe neumwe mushandisi, imwe yeiyo yakanyanya kutarisisa yaive mukana wekuita zvakawanda kuburikidza nehunyanzvi uhu, kubvira pakupedzisira yakadzivirira kuve nekupeta-pinda-bhatani bhatani.
Nekuda kweiyi tekinoroji taifanira kumanikidza zvishoma kuruboshwe kumucheto kwescreen kuitira kuti ekupedzisira akavhurwa mafomu aonekwe. Kana iwe ukashandisa iOS 11, iwe unenge wave wakasimbisa kuti basa iri harisi kuwanikwa, chimwe chinhu chatinga funge zvakajairwa kuve beta. Asi zvinoita kunge zvisiri. Apple yakazvitakudza.
Vashandisi vakajairira iyi nzira nyowani yekuwana multitasking vanoishandisa zvakanyanya sezvo iri nzira inokurumidza kupfuura yetsika, kana zvasvika pakushandura pakati pekushandisa. Hatizive kana pfungwa yaApple ichipfuura shandisa system yakafanana neiyo yatinogona kuwana pane iyo iPad, inotsvedza chigunwe chako kubva pasi kusvika kumusoro kwechiratidziri, kana kunyangwe kubviswa kwacho kuchikurudzirwa nekuburitswa kuri kuuya kweiyo iPhone 8, iyo iPhone isina chero miganhu pachiratidziri.
Apple engineering yakasimbisa kuti 3D Kubata multitasking kwakabviswa nemaune muIOS 11. Ini ndakajeka. pic.twitter.com/kiCcLq9XMB
- Bryan Irace (@irace) June 30, 2017
Dambudziko rekuti nzira iyi yekuwana boka revanhu yaizounza mune ingangoita isina muganho mudziyo iri pachena, kubvira pakutanga Chero chero refu refu yekudzvanya kumucheto wekuruboshwe kwechidzitiro yaizotanga multitasking. Bryan Irace anga ari mugadziri uyo, aneta nekuona kuti basa iri harina kuoneka sei mumabeta maviri ekupedzisira, akabata Apple uye vakasimbisa kuti basa iri rakabviswa nemaune.
Kana chikonzero chekubvisa chimiro ichi chiri chakakonzerwa nesaizi screen ye iPhone 8, Apple inofanirwa kuenderera mberi nekupa sarudzo pane ese akambobata zvishandiso, kubvisa basa iri mumudziyo mutsva, sezvazvinowanzoita nemazhinji emabasa matsva ayo ainowedzera mune yega vhezheni, mabasa anogona kumisikidzwa zvakakwana seyajibreak tweaks inotiratidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 inobvisa mukana we multitasking neiyo 3D Kubata
Iri basa rakaunzwa kuti bhatani reKumba rigare kwenguva yakareba, nekuti pane iyo iPhone 7 haina kuita mushe. uye iphone 8 ine bhatani pane inobata haina musoro
Pindura kune sdfsd
Kana ndikatarisa kune avo zuva rimwe chete randinoisa iyo beta 1 yeIOS 11. Zvino, izvo zvinotimanikidza kubaya-bhatani reKubhatani, asi kana iyo iPhone 8 ichinge isina bhatani repamba uye hazvingakwanise kuvhura multitasking nebasa rekutsikirira chidzitiro kumucheto wekuruboshwe, chii chasara kuti isu tivhure multitasking? Iyo interface pane iyo iPhone 8 kana chero iyo yainodaidzwa inounza Kumba bhatani mune dhizaini nyowani Siri bhatani kutiteerera? Uchagara uine icho pachiratidziri pasi pechikepe? Ndiudze kuti tingamise sei kuita kwakawanda kuita?
Chokwadi ndechekuti ini ndaigara ndichienderera nekushandisa iyo mbiri bhatani repamba bhatani, nekuti kazhinji ini ndinogara ndichishandisa iyo iPhone neruoko rwangu rwerudyi uye zvinondiomera kuti ndive nekumanikidza kumucheto wekuruboshwe (vanofanira kunge vakaisa iyo shanda pamativi ese maviri) Saka handina kuzombojaira kushandisa multitasking ne 3D kubata, uye neiyo iPad chokwadi ndechekuti ndakazojaira nekukurumidza kushandisa multitasking nekutsvedza chigunwe changu kumusoro, yaive mhinduro iri nani, ndinovimba vaizoshandisa chimwe chinhu chakafanana pane iyo iPhone Nechiratidzo, nekuti neiyo iPad painobvisa iyo yepakati kutonga, multitasking zvakare inobuda uye nekuda kwehukuru hwechidzitiro inoshanda zvakanaka asi paiyo iPhone haigone kuitwa nekuti iyo yepakati kutonga inobata iyo yakazara skrini .
Ini ndinofunga kuti kune vazhinji zvichave zvinoshungurudza iyi Apple sarudzo nekuti inobatsira zvikuru kunyanya kudzivisa kushandisa bhatani repamba uye kuti rinoguma ratyoka nekuda kwekushandisa kwakawanda, ndinovimba Apple icharidzorera nekuisanganisira zvakare
Iyo jailbreak yafa
Nhau dzichangoburwa kubva kuGoogle Mifananidzo dzinouya kune yayo vhezheni yeIOS